Puntland oo beenisay in Dowladda Federaalka Soomaaliya lacag ugu deeqday wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo beenisay in Dowladda Federaalka Soomaaliya lacag ugu deeqday wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo
November 25, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa beenisay in aysan jirin lacag ay si rasmi ah Dowladda Federaalka Soomaaliya ugu deeqday dhismaha wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay Puntland.
“Dawladda Puntland waxay la wadaagaysaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland in ay tahay libin sheegasho beena, sheegashada Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku sheeganayso inay ugu deeqday wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo lacag dhan $1500,000.00 (Hal Milyan Iyo Shan Boqol oo Kun oo Doolar).” Ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay madaxtooyada Puntland maanta oo Axad ah.
Puntland ayaa sheegtay in lacagtu ay ka timid Midowga Yurub loona soo mariyay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
“Dowladda Puntland waxay cadaynaysaa in lacagtan ay Dowladda Federaalka ku libin sheeganayso ay tahay deeq ay bixisay Midowga Yurub loona yaqaan Surge Support, taas oo Dowladda Dhexena lasoo mariyay, ayaa qoondadii loogu talagalay Dowladda Puntland sanadka 2018 waxay dhammaanteed Dowladda Puntland ugu deeqday wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo,” ayaa lagu yiri bayaanka.
“Sidaas daraadeed wax lacag ah oo Dowladda Federaalka Soomaaliya leedahay ama ay ku bixisay wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo ma jirto, balse dowladda Puntland ayaa qoondadeedii lacagta Surge Support ugu deeqday wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo,” ayaa Puntland ku sii sheegtay bayaanka.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in weeraro culus dhawaan lagu qaadi doono maleeshiyada Al-Shabaab si aysan u dhibaatayn doorashooyinka la filayao in ay dalka ka dhacaan. Kadib kulankii asbuuc laha ahaa ee golaha [...]
Bulshada Soomaaliyeed ee kunool Columbus Ohio iyo dhammaan Mareykanka oo dhan ayaa cabsi lasoo deristay kadib markii wiil Soomaali ahaa oo qaxooti ku ah wadankaas uu 11 qof ku dhaawacay weerar toorayeyn ah oo uu [...]